Golf | Ngwongwo Golfing kacha mma - cheapinternetsecuritysoftware.com
Na Grosvenor Casino, anyị na-enwekarị agụụ maka egwuregwu. Anyị emeela ka anyị nweta ndị na-enwe ụdị agụụ a t cha cha cha cha chan’ịntanetị! Taa, anyị enyochala ndị gọọlfụ kachasị mma n’oge niile, ma ugbu a, ọ bụ oge iji chọpụta swings golf kachasị mma ka amara egwuregwu karịa afọ.
Anyị niile ekiri Obi ụtọ Gilmour miniature hụ d e ịgba ọsọ’zuru oke’, mana agbanyeghị ụdị golfing club dị ka enwere naanị otu ihe dị mkpa – nsonaazụ njedebe.
Kemgbe ọtụtụ afọ enwere mgbanwe gọọlfụ dị ka ọrụ nka nke mere ka ndị gọọmenti nwee ọtụtụ mmeri, yana ụfọdụ ịgbalịsi ike.
A na-enyocha nkọwa ọ bụla n’otu oge n’ogo, ma ị nwere ike itinye oge na mbọ zuru oke iji mezue ngbagharị gị iji rụpụta nsonaazụ kacha mma.
Fewfọdụ ndị gọọmenti that a kpọtụrụ ahan’okpuru ga-anọ na US Open na Pebble Beachn’izu a, Grosvenorsport.com na-elele ụfọdụn’ime golfing club kachasị mma.
Mgbe mbụ ị na-ewere goofu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nkụzi ọ bụla na-egosipụta ntụgharị Hogan dị ka otun’ime ihe kachasị mma, ọ na-anwale oge.
Swing dị mfe, mana ike, mara mma ma dịkwa irè.
Kwe ka nwoke ahụ gwa gị ya ebe a…
O nwere ike ịbụ na ọ meriri ndị isi abụọ na ọrụ ya, mana enwere obere ngbanwe nke dị ka nke South Africa.
Ọ dị ka mbọ, na ọ bụ ezie d e ọ bụghị otun’ime ogologo oge, ọ na-egosi d e ọ dị oke ọfụma ma na-eme ka ọ nọrọn’ọnọdụ dị mma iji nọrọn’elu egwuregwu ahụ ọtụtụ afọ ugbu a.
Fred Di na Nwunye
Ihe atụ ọzọ nke ọrịa na-adịghị mma na-ele anya, mana ọ dị irè bụ nke Fred Di na Nwunye,n’agbanyeghị na ọ gbanwere ya na ọrụ ya niilen’ihi mmerụ ahụ.
Ọ dịghị arụ ọrụ, nke ahụ na-abụkarị isi ihe na-aga nke ọma. Ọtụtụ ndị gọọlfụ nkịtị bidoro na-eche na ị ga – akụ bọọlụ ike ka ị nwere ike iji kụọ un nke ọma – mana nke ahụ agaghị agabigan’eziokwu ahụ.
Ọ bụrụn’ị na-elegharị anyan’agbata di d e nwunye, ọ bụ ihe mara mma ma nyere ya aka inweta mmeri nke Nna-ukwun’aho 1992, ya na akara-isi nke atọ na ndị isi ndị ọzọ niile.
Tiger Woods siwing nwere ike ọ gaghị eyi nke kachasị mma mana o nyelarị ya nnukwu ọkwa.
Onye mmeri 15 bụ isi meriri nwere anyaụfụ azụ d e 2000 mgben’okpuru tutelage nke Butch Harman nke rụpụtara ụfọdụ nsonaazụ na-agbawa obi
Ọrịa nwere ike wepụrụ ihe na egwuregwu yan’afọ ndị na-adịbeghị anya mana ike ya ịkụ bọọlụ nke ọma enweghị ike ịbụ ajụjụ.
Otun’ime mmeri un ndị ama ama, ebe ngagharị un bụ ihe akaebe, bụ US Open d e Pebble Beach d e 2002 ma bụrụkwa otun’ime ndị ọkacha mmasị ọzọ d e Grosvenorsport.com golfing clubs emegide nke afọ a na otu ebe.
Mma dịn’anya onye na-ahụ ihe, ọtụtụ kwenyere d e ngagharị McIlroy ka ọ nọrọ ebe ahụ nke kachasị mma.
Ọzọ ọ bụ nfe dị mfe ma dị irè na mgbe ọ ga – ga agwa gị na ọ chọrọ’ijide ya dọwaa ya’ ị gaghị enwe ike ịkọwa nke ahụ website Id ntụgharị ya.
O siri ike website t mgbe ọ malitere ntanye ruo mgbe ọ tụrụ bọl d e enwere ihe kpatara ọ ga-eji na-agba mgban’elu egwuregwu ahụ ọtụtụ afọ na-abịa.
Ọ na-abụkarị swings dị mfe nke nwere ike ịdị irè, nke a na-akọwapụta nke McIlroy.
Sam Snead nwere otun’ime ihe na-atọ ụtọ kachasị mma nke egwuregwu ahụtụrụla.
Na mgbakwunye na nke ahụ, o nwere otun’ime ike dị ike na-agagharị na nke kpatara un aha aha’The Slammer’.
Ngagharị nke Snead nyeere ya aka inwe mmeri asaa bụ isi, naanị ya gbapụrụ na ya bụ US Open ebe ọ gwụchara nke abụọn’oge anọ.
Obi abụọ adịghị un t onye Ọstrelia nwere otu egwuregwu kachasị mma na egwuregwu ahụ.
Dika Scott banyere ebe a na-eme egwuregwu golf , swing garan’ihu na-emeziwanye dika otutu ndi ozo a kpọtụrụ aha, o yiri ka enweghi ike ma nye ike puru iche nke nyeere ya aka inweta ndi Nna-ukwu na 2013 yana isi-ise mechara ndị ọzọ niile Majors.
Fancy ndị dị ka Scott, McIlroy ma ọ bụ Woods iji maa akan’izu a t US Open? Lelee ihe ị ga – emeri na nkwụnye self anyị ma nwee ọmarịcha egwuregwu ịkụ nzọ dịn’ịntanetị ebe a. Lelee nsogbu anyị na ọtụtụ egwuregwu ndị a ma ama, gụnyere Horsgba ịnyịnya na Betgba bọl.
Tags:Golf kacha Mma Ngwongwo